KULANKA SAFIIRKA CUSUB EE BRITAIN EE LOO MAGACAABAY DALKA SOOMAALIYA HARRIET MATHEWS. - Anti Tribalism Movement : The ATM
KULANKA SAFIIRKA CUSUB EE BRITAIN EE LOO MAGACAABAY DALKA SOOMAALIYA HARRIET MATHEWS.
Maalinimadii Arbacada 13kii May 2015ka ayaa waxa ay dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda (Anti – Tribalism Movement) iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay kulan la qaateen Safiirka cusub ee Britain ee loo magacaabay dalka Soomaaliya, haweeneyda lagu magacaabo Harriet Mathews.
Waxaana kulanka looga hadlay arrima dhowr ah oo ay ka mid yihiin:
Qorshaha Safaraadda Britain ee dalka Soomaaliya.
Kaalinta Safaaraddu ay ka qaadan karto arrimaha xuquuqda Aadanaha ee Soomaaliya.
Dhiiri-gallinta dhallinyarada Soomaaliyeed si ay qeyb kaga qaataan siyaasadda dalka.
Dib u eegista deeqaha dalka Britain ee ku aadan Soomaaliya iyo sida loo maamulo.
Kaalinta Britain ay ka qaadan karto dib u dhiska iyo qalabeynta ciidanka Soomaaliya.
Fududeynta barnaamijyo wacyi-gallin iyo dib u heshiisiin dalka oo dhan ah.
Taageeridda dadka baahida-gaarka ah qaba ama naafadda ah ee ku nool Soomaaliya.
Dowladda Britain iyo kaalinteeda ku aadan xiritaanka Xawaaladaha Soomaalida.
Xiriirka Safaaradda iyo qurba-joogta reer UK ee dib ugu laabtay dalkii hooyo.
Ka qeyb-qaadashada nidaam cadaalad ku saleysan iyo fursado shaqo abuuris ah.
Fara-gallinta dowladaha dersika (Ethiopia & Kenya) ee siyaasadda Soomaaliya.
Kulanka ayaa ahaa mid qaatay mudo 3 saac ah oo ay dhammaan ka qeyb-galayaashu fursad u heleen inay fikrado, tallooyin iyo su’aalo isku weydaarsadaan. Qaar ka mid ah ka qeyb-galayaasha kulanka ayaa xusay in loo baahan yahay barnaamijyo guud oo wacyi-gallin ah si la iskugu soo dhaweeyo dadka Soomaaliyeed meel waliba oo ay joogaan, loona helo nidaam ku saleysan cadaalad, kala danbeyn, horumar, wax-wada qabsi iyo waliba Soomaalinimo.
Harriet Mathews, oo ah haweeneyda noqoneysa safiirka cusub ee Britain ee loo magacaabay dalka Soomaaliya ayaa tiri “Wuxuu kulanku ahaa mid mira-dhal ah oo aan wax badan ka faa’iday” waxa ay sidoo kale tiri “Waxa aan ku dhashay dalka Malawi oo ku yaala bariga koonfureed ee qaaradda Afrika, waxa aan marka xiriir fiican la leeyahay qaaradda Afrika.”
Kulanka ayaa xooga lagu saaray sidii safaaradda dalka Britain ay qeyb weyn uga qaadan laheyd geedi socodka nabadda iyo isku soo dhawaanshaha dadka Soomaaliyeed. Waxaana xusid mudan in Harriet Mathews ay tiri “Aniga ayaa doortay in aan ka shaqeeyo dalka Soomaaliya si aan kaalin uga qaato nabadda iyo horumarka Soomaaliya.”
Waxaa kulanka si weyn u hareeyay arrimaha xuquuqda aadanaha, daryeelka dadka naafadda ah iyo taageridda iyo qalabeynta ciidanka xooga dalka Soomaaliya oo kaalin muhiim ah ka qaadan kara dib u soo cellinta nabad waarta oo ay helaan dadka Soomaaliyeed oo dhan.
Qeybihii danbe ee kulanka ayay Harriet Mathews tiri “Waxaan codsanayaa in marka aan ka soo laabto dalka Soomaaliya aan dib kulankaan oo kale u yeelano si aan idin kula wadaago wax waliba oo aan soo arko iyo wixii suurta-gal ah oo laga qaban karo.”
Dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda (Anti – Tribalism Movement) ayaa balan qaaday inay diyaar u yihiin qaban-qaabinta kulan waliba oo looga hadlayo arrimaha dadka iyo dalka Soomaaliya si looga baxo dhibaatooyinka horyaala dadka Soomaaliyeed.